Tsy Mahita Esoeso Amin’ny Fametrahana Dinôzôro Eo Anoloan’ny Tranom-panjakana Ny Fitondrana Miaramila Thailandey · Global Voices teny Malagasy
Tsy Mahita Esoeso Amin'ny Fametrahana Dinôzôro Eo Anoloan'ny Tranom-panjakana Ny Fitondrana Miaramila Thailandey
Voadika ny 20 Janoary 2017 15:13 GMT
Modely dinôzôro eo anoloan'ny Lapam-panjakana ao Bangkok, Thailandy. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin’ ny TV Matichon nampidirina tao amin'ny YouTube
Mankalaza ny Andron'ny Ankizy Isan-taona amin'ny alalan'ny fanomezana hetsika fanabeazana sy mahafinaritra isan-karazany ho an'ny tanora ao amin'ny firenena i Thailandy isaky ny volana Janoary.
Matetika manasa ny ankizy amin'io andro io ny sampan-draharaham-panjakana mba hitsidika ny biraom-panjakana ary hianatra momba ny asa birao ary mahazo fanomezana avy amin'ny fanjakana. Ny tafika, ohatra, nahazo laza [mg] noho ny famelàna ireo ankizy hilalao miaraka amin'ny fiara mifono vy sy basy tena izy ao amin'ny tobin'ny miaramila isan-taona rehefa Andron'ny Ankizy.
Tamin'ity taona ity, nanokatra ny vavahadiny mba hidiran'ny ankizy ny Lapam-panjakana, izay misy ny biraon'ny praiminisitra sy minisitera sasany, ary nandrisika azy ireo mba hilalao amin'ireo modely dinôzôro 20 napetraka tao anatiny.
Misokatra ho an'ny daholobe ny Lapam-panjakana amin'ny Asabotsy Andron'ny Ankizy. Manasongadina ny dinôzôro.
Ireo dinôzôro napetraky ny Departemantan'ny Harena An-kibon'ny ireo dia maodelin'ireo karazana dinozoro izay sisan-karingarina nofongarina tao Thailandy: dinôzôro Phuwiangosaurus sirindornae, Siamotyrannus isanensis and Kinnareemimus.
Ho an'ireo mpanara-maso ny politika Thailandey, tsy hain'izy ireo ny tsy haneho hevitra momba ny dikan'ny fametrahana maodely dinôzôro eo anoloan'ny tranobem-panjakana izay maneho andrim-panjakana naka fahefana tamin'ny taona 2014 ny mpifehy azy ao ankehitriny ary tsy nahavita nametraka ny demaokrasia sivily teo amin'ny firenena nanomboka tamin'izany fotoana izany.
Manontany ianao hoe planeta inona no onenan'ny fitondrana miaramila raha tsy mahita esoeso amin'ny fisian'ny dinôzôro ao amin'ny tranom-panjakana…
Marobe loatra ireo dinôzôro ao amin'ny tranom-panjakana… misy vitsivitsy mihitsy aza tazana ao ivelany.
Nanatontosa fanonganam-panjakana efa im-polo mahery hatramin'ny taona 1930 ny tafika. Nandray ny fitondrana izy tamin'ny taona 2014 ary namolavola lalàmpanorenana vaovao ahitana fehezan-dalàna izay.niantoka ny andraikitra lehibe hotazonin'ny miaramila amin'ny asa birao na dia hotontosaina amin'ny manaraka aza ny fifidianana.
Nanamarika ihany koa lay mpisera Facebook Anuthin Wongsunkakon:
Mahatsikaiky, nofenoin'izy ireo zavaboary Jiorasika ny bozaka tamin'ity taona ity ary tahaka izany indrindra no hiafarantsika rehetra.
Kong Rithdee, tonian-dahatsoratry ny gazety Bangkok Post mahita vazivazy ratsy amin'ny fampisehoana ny dinôzôro:
Tsy karazana vazivazy ratsy ve izany, sa tsy izany? Dinôzôro ao amin'ny Tranom-panjakana, toy ny tsy dia manana an'izany firy isika? Fanindriana “Jurassic” ao amin'ny Jiorasìka, fampirantiana mampiseho karazam-biby mandady 20 fahagola nofongarina tao Thailandy no antsoina hoe “Fianjoria iray miaraka amin'ny Dinôzôro”, izay mitovy faneno amin'ny fianjoria andavanandro iainantsika isan'andro ihany. Afaka mihetsika ny sasany amin'ireo dinôzôro (mazava ho azy). Tsy manampahataperana ny tsikaiky amin'ny sisan-karingarina, ary torak'izany koa ny fampitahana natao tsy nahy.
Namaritra ny dinôzôro ho mariky ny demaokrasia Thailandey ny tranonkalam-baovao tsy miankina Prachatai, sady mpiara miasa amin'ny Global Voices. Eny tokoa, ho an'ny olona marobe, ny finoana hoe mety ho azo tanterahana amin'ny alalan'ny fitondrana jadona miaramila ny demaokrasia dia maneho fijery politika efa lany daty,
Mandritra izany fotoana izany, manantena isika fa nankafy ny fiarahany tamin'ny dinôzôro -tao anatin'ny Tranom-panjakana sy tao ivelany ny ankizy Thailandey